संसद विघटन मुद्दाः सेना देखाएर न्यायालय धम्काउँदै प्रधानमन्त्री
वि.सं २०७७ फागुन २५ मङ्गलबार फोरेक्स युनिकोड मौसम
× मुख्य पृष्ठ स्वास्थ्य-शैलीविश्वनयाँ पुस्तापर्यटनप्रकाशकीयप्रदेशकर्णालीविचारगण्डकीलुम्बिनीप्रदेश १वाग्मतीसुदूरपश्चिमफिचरफोटो फिचरमुख्य समाचारखेलकुदराजनीतिरेडियो
११ फागुन, २०७७
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स‌ंकटकालको हौवा फैलाउने काम सुरु गरेका छन् । नेपाली सेनालाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्नका लागि अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बिचको संकटकालको विषयलाई लिएर छलफल भएको स्रोतले बतायो । स‌ंकटकाल लगाउने सम्भावना नदेखिएको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई व्रिफिङ गराइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहमा प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत गएको उच्च श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीले संकटकालका लागि तयार हुन भनिरहका बेला सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेट गरेका हुन् । तर अहिले नै संकटकाल लगाउने स्थिति नभएको भन्दै नेपाली सेनाले इन्कार गर्दै आइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले भेटमा अबको राजनीतिक निकास र स‌ंसद पुनस्थापना अघी स‌ंकटकालको विषयमा प्रधानसेनापतिसँग राय बुझेको सर्वोच्च श्रोतले बतायो । भेटमा प्रधानसेनापतिले अहिले संकटकालको सम्भावना नदेखिएको र राजनीतिक संकटमा अदालतको भूमिका अतुलनीय हुने जवाफ दिएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा मत आइरहेका बेला प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधीशको भेट विवादस्पद बनेको छ । प्रधानन्यायाधी र प्रधानसेनापतिको सो भेटको विषयलाई लिएर सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीले अहिलेको राजनीतिक तरलता र संकटका बेला राज्यकै जिम्मेवार अंगहरूले समेत आफ्नाे क्षेत्र बाहिर कसरत गर्ने नेपालमा पुरानै चलन भएको बताएका छन् । सो भेटलाई उनले जुन गैरब्यवसायिक हाे भनेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भए स‌ंकटकालको अस्त्र
अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला गरे स‌ंकटकाल लगाउन सक्ने सम्मको अबस्थासम्म पुग्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालाई एलर्ट भएर बस्न समेत पटक पटक निर्देशन दिइसकेका छन् । दुई महीनाअघि १९ म‌ंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकालको पूर्वाभ्यास समेत गरिसकेका छन् । नेपाली सेनाको बख्तबन्द गाडी सडकमा उतारेर उनले उस्तै परे संकटकाल हुन सक्ने संकेत दिइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर नगरे उनले संकटकालको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सुरक्षा परिषद्को बैठक संयोग मात्रै कि पूर्वयोजना
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसला अन्तिम चरणमा पुगेको बेला देशको समग्र अबस्थालाई र शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर बस्न लागेको सुरक्षा परिषद्को बैठक संयोग मात्रै मान्न नसकिने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । आज बस्न लागेको बैठक आकस्मिक भनिएको छ । सुरक्षा खत्तरा उत्पन्न भए कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने बुझिएको छ । यता नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने परिषद्को बैठक नियमित भनेका छन् । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासँगको भेट पनिस कुनै प्रयोजनका लागि नभइ संयोग मात्रै पर्न गएको भनेका छन् । तर अहिलेको राजनीतिक परिघटनामा प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधीशको भेट भने अर्थपूर्ण रहेको छ ।
अदालतको फैसलापछि संसद पुनस्थापना नभए के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न नसक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विरटानगरको आमसभा र सुदुरपश्चिमबाट उनको बोलीमा हतास आएको छ । सुरुमा आफू अनुकुल फैसला आउने कुरामा ढुक्क रहेका प्रधानमन्त्री ओली कालान्तरमा प्रतिकुल अवस्था देख्न थालेपछि सत्तामा बसेर सेटिङको चर्चा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । ढुक्क भएर निर्वाचनमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शनिबारयता बोली मात्रै फेरिएको छैन अदालतले जालझेल गरेको भन्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा पुगेर कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिक्डम र सेटिङबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने बताएसँगै अब जे पनि हुन सक्ने चेतावनी भाषा दिइसकेका छन् ।
अदालतको संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला गरे उनले पुन संसद विघटन गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्न सक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहसको क्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले मिति तोकेरै पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप बुझेरै होला थापाले संसद पुनस्थापना मात्रै नभइ यति दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने फैसला गर्नुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले संकट सिर्जना गर्न अर्को हतकण्डा मच्चाउन सक्ने भएको हुँदा सो विषयमा पनि छलफल केन्द्रीत भएको छ ।
संसद पुनस्थापना भएमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन सक्ने भएकाले उनले पुन विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदले निकास दिनेछ । तर प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति र स्वभावले उनी अझै अर्को हत्कण्डा मच्चाउने दाउमा छन् ।
संसद विघटन सदर नहुने संकेत देखिएपछि उनले बिराटनगरबाट संसद पुनस्थापना नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहन पुन अर्को हत्कण्डा अपनाउन खोज्दैछन् भन्ने सन्देश हो । पुनस्थापना भए संसद बैठक नबोलाउने र समय घर्काेउने रणनीतिमा ओली पुगेका छन् ।
मङ्गलबार ११, फागुन २०७७ ९:५३:३६ मा प्रकाशित
कर्णालीका पार्टी कार्यालयमा आ-आफ्नो साइन बोर्ड
अधिनायक लाद्ने गुरुयोजना असफल: ऋषि कट्टेल
माओवादी केन्द्रको निर्णय : २९ फागुनमा केन्द्रीय कमिटी र १ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला
कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय
ट्रक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
ताप्लेजुङ्गका आगलागी पीडितलाई नेपाल बैंक लिमिटेडको सहयोग
शुक्रबार दुई वटा कम्पनीको आईपीओ खुल्दै
नेकपा नाम सम्बन्धि विवाद : यसकारण उल्टिन सक्छ सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्चको फैसला:ओलीदेखि वामदेवसम्मले राजनीतिबाट ‘सन्यास’ लिनुपर्ने !
ओलीतिर गएकाहरु नफर्किए कारबाही गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रकाे तयारी
नेकपा अल्पमत पक्षीय दलको बैठक बालुवाटारमा किन गोप्य ?
उर्लाबारीमा प्रधानमन्त्रीले सम्झिए जाँड खाएको र माछा मारेको विगत
ओली समुह छाडेर दुई सांसद नेकपाको (प्रचण्ड- माधव) बहुमत समुहमा
प्रचण्ड–नेपाल पक्ष फैसला पुनरावलोकनमा जाने
निर्वाचन आयोगको निर्णय : एमाले– माओवादी छुट्टाछुट्टै दर्ता, एकता गर्न १५ दिने म्याद
एमालेमा ओली र नेपालको शक्ति ‘बराबर’ (नामावलीसहित)